Nhau - Goldenor Electronic Technology Co., Ltd.
Professional Mugadziri Nhanganyaya Chassis Ndinofanira kusarudza sei?
Kana ndichisarudza chassis, ndinofanira here kusarudza yeindasitiri yekudzora chassis kana yakajairika chassis? Iwe zvakare une kusahadzika kwakadai uye kunetseka, ipapo ini ndichakutora iwe nemupepeti kuti uongorore uye unzwisise kuti ungatenga sei chassis!
Server komputa kesi yakakwira vhorumu Kurumidza kugadzirisa nzira
kana iwe Kazhinji Unowanzove neComputer kesi Ita ruzha rukuru, Zvino ngationgororei pamwechete kuti nei ruzha rwakagadzirwa uye kuti ungarupedza sei!
PAMUSORO PAMUSORO PEDYO TINOTORA
Nguva dzose chengetedza kesi yevhavha kuti uve nechokwadi chehupenyu hweMugadziri wako
Kana iwe uchida kuona kuti komputa yako inomiririra ine hupenyu hwakareba, saka unofanirwa kuita imwe kugadzirisa pane yako server kesi. Kunyangwe hazvo basa hombe remhosva iri rekuchengetedza iyo inomiririra makomputa, iyo server kesi inodawo kutarisirwa kwedu.
Iko iriko kona yakafa yeserver chassis yekugadzirisa
Maitiro ekusiyanisa kana iyo indasitiri yekudzora chassis isiriyo
Kunyangwe iri chassis yakajairika kana yeindasitiri yekudzora chassis, pachave nekumwe kukundikana mushure mekuishandisa kwenguva yakareba, asi vanhu vazhinji havagone kusiyanisa uku kukundikana, saka havazive kuti chassis yatadza uye haigone kuve inochengetwa nenguva.